Lega Serie A oo kulan caalami ah u adeegsan doonta hannaanka Muuqaalka Kaalinta Garsooraha ee VAR (Kulankee?) – Gool FM
Lega Serie A oo kulan caalami ah u adeegsan doonta hannaanka Muuqaalka Kaalinta Garsooraha ee VAR (Kulankee?)
Raage January 13, 2017
(Roma) 13 Jan 2017 – Waxaa 18-ka bishan gegada Stadio Friuli ee magaalada Udine ku wada dheelaya xulalka 19-jirrada ee Talyaaniga iyo dhiggooda Spain.
Ciyaartan ayaase noqon doonta mid taariikhi ah oo loo adeegsan doono hannaanka loo yaqaanno Muuqaalka Kaalinta Garsooraha ee VAR (Video Assistant Referees), taasoo ay markii horreeysay maamulayso Lega Serie A oo fasax ka haysta IFAB / FIFA waloow ay ciyaarta qabanayaan garsoorayaal UEFA ah.
VAR ayaa garsoorayaasha ka caawinaya go’aaminta dhinac-baxyada (offside), is riixa iyo khaladaadka diilinta ganaaxa ka dhaca kahor inta aanu gool dhalan iyo xitaa is afgaarka iyo dhaqamada isboortiga ka baxsan ee garoomada ka dhaca.
Ciyaartii ugu horreeysey ee loo adeegsado tiknolojiyaddan ayaa ahayd ciyaar sxbtinimo oo magaalada Bari ee koonfurta Talyaaniga ku dhex martay dalalka Talyaaniga iyo Faransiiska 1-dii Sebtember 2016.
Dowladda Shiinaha oo beenisay arrin taabanaysa iibka AC Milan oo beryahan la isla dhex marayay!
Isku aadka Rubuc dhamaadka Copa del Rey oo la sameeyay, Barcelona iyo Real Madrid oo la kala ilaaliyay